Branches Map - Myanmar Citizens Bank (MCB)
ပြည်နယ် / တိုင်းMyitkyinaKachin Stateရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်တနင်္သာရီရှမ်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
1 ကျောက်တံတား (၂)ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၃၈၃)၊ ၃၇လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်း‌ထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ ကျောက်တံတား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 8386018,01 8386019 01 8386018,01 8386019
2 ကျောက်တံတား ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂၅၆/၂၆၀)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကျောက်တံတား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-255859,255587,255797 01-255932
3 ကြည့်မြင်တိုင်ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၅၂၆)၊ မြေညီထပ်၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-508336, 8 01-508336, 8
4 ခရမ်းဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၃၆၃)၊ကျောက်တိုင်လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ခရမ်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 056 30051, 056 30159, 056 30682 056 30051, 056 30159, 056 30682
5 စစ်တွေ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၄၄) ၊ ကုန်သည်လမ်း ၊ မောလိတ်ရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ စစ်တွေ ရခိုင်ပြည်နယ် 043-22038 043-22039
6 စမ်းချောင်းဘဏ်ခွဲ Twin Centro Condo,Shop(1),Ground floor,1st,2nd,3rd floor shop,ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ စမ်းချောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-532537,38,39,40,41 01-532537,38,39,40,41
7 စော်ဘွားကြီးကုန်း ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၉၁၉)၊ (၁၀)မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အင်းစိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-3644147, 3644425, 3644911 01-3644147, 3644425, 3644911
8 ဇီးကုန်း ဘဏ်ခွဲ အမှတ်-(၁၃၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 075-49600, 075-49321 075-49600, 075-49321
9 တန့်ဆည် ဘဏ်ခွဲ မေတ္တာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ရွှေဘို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 075-49707,9075-49708
10 တာချီလိတ်ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၁၊၁၅၅၊ဍ) နှင့် (၁၊၁၅၅၊ဌ)၊ အောင်ချမ်းသာတိုက်ခန်း၊ ရှမ်းရိုးမကွင်းရှေ့၊ ဗိုလ်ချူပ်လမ်း၊ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း။ ရှမ်းပြည်နယ် 084 52329,084 52370 084 52329,084 52370
11 တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲ အမှတ် -(၂၀၈)၊ ရေထွက်ဦးလမ်း၊ ကန်ရှေ့ရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။ တောင်ကြီး ရှမ်းပြည်နယ် 081-2125770 081-2125770
12 တောင်ဥက္ကလာပ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၃၀၃) ၊ မြေညီထပ် ၊၁၂ ရက်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 3551538/19 01 3551538/19
13 ဒေါပုံ ဘဏ်ခွဲ Room No. (240), Level (2),Capital Hyper Market, Min Nandar Road, Bamaraye Quarter, Dawpon Township, Yangon. ဒေါပုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-551744 01-551744
14 နေပြည်တော် ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၆)၊ အဆင့်မြင့်သီရိရတနာစျေးဝန်း ၊ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဇမ္ဗူသီရိ နေပြည်တော် 067-421983, 067-421818 067-421818
15 နေပြည်တော်(မြို့မစျေးဘဏ်ခွဲ) အမှတ် (ပ -၂၉)၊ ပွဲရုံတန်း၊ နေပြည်တော်မြို.မစျေး၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဇမ္ဗူသီရိ နေပြည်တော် 067-3420759,067-3420760 067-3420760
16 ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၅၉)၊ မြို့ မလမ်းနှင့်ကုဿိန္နာရုံလမ်းထောင့် (၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ပခုက္ကူ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 062-24037, 8 062-24037, 8
17 ပန်းဘဲတန်း မီနီ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၂၂၈/၂၄၀) ၊ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရုံး၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-391549,01-391550 01-391550
18 ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၃၁/၃၃ အေ) ၊ (၅၆)လမ်းအနီး၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-9010853, 4,501-9010854
19 ပုသိမ် ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၃၂) ၊ ကုန်သည်လမ်း ၊(၄)ရပ်ကွက် ၊ပုသိမ်မြို့။ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး။ ပုသိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 042-23991,2042-23991, 2
20 ပဲခူးဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၁)၊ မင်းလမ်းမကြီး၊ ဇိုင်းဂနိုင်းမြောက်ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပဲခူးမြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 052-2201884
21 ပြည် ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၁၀၅) ၊ လမ်းမတော်လမ်း နှင့် ထီးစုလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက် ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပြည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 053-26128, 053-24600 053-26128, 053-24600
22 ဗိုလ်အောင်ကျော်ဘဏ်ခွဲ အမှတ်-(၂၈၅)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8398362, 8398374 01-8398362, 8398374
23 ဘုရင့်နောင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်- (ည-၅၂/ဘီ)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မရမ်းကုန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-3683326,39688760 01-683326
24 ဘုရင့်နောင် မီနီ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်- (ဘီ/ ၈၁-၈၂) ၊ကျွန်းရွှေဝါလမ်း နှင့် ခရေလမ်းကြား ၊ ကံ့ကော်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ မရမ်းကုန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-3528990,3528989 01-3528990,3528989
25 မကွေး ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၅၆)၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့ ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ မကွေး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 063-2028807 063-2028808, 063-2028809
26 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၁) ဦးပိုင်အမှတ် (၂၂)၊ အကွက်အမှတ် (၆၀၄)၂၇-လမ်း နှင့် ၈၁-လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-4035942,302-4035942, 02-4060162
27 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၂) အကွက်အမှတ် (၇၂၁) ၊ ၇၃-လမ်း နှင့် ၂၇-လမ်းထောင့် ၊စိတ္တရမဟီ ရပ်ကွက်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-4033301, 4069258, 4069259 02-4069258, 9
28 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၃) အမှတ် (၂၅) ၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားဝင်း ၊စွယ်တော်ဘုရားအရှေ့မြောက်ဘက်၊ အမရပူရမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-5155173, 4
29 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၄) အကွက်အမှတ် (၆၄၅) ၊ အမှတ် (၃၀၅)၊ လမ်း(၈၀)၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်းကြား၊ ေဟမမာလာရပ်ကွက်၊မဟာေအာင်မြေမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။ မဟာအောင်မြေ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-4030279, 4030280
30 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၅) အမှတ်-(တ/၄-၃၁)၊ (၆၂)လမ်း၊ ငုပြာလမ်းနှင့် သဇင်လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ချမ်းအေးသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းမြသာစည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-2846179, 02-2848180
31 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၆) အမှတ်-(၂၄)၊ (၂၆-ဘီ) လမ်း၊ (၈၆)လမ်း နှင့် (၈၇)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ အောင်မြေသာဇံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-4030373,4066421, 4066422
32 မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၇) အမှတ်-၄၄၂၊ လမ်း(၈၀)၊ (၂၈)လမ်း နှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02 403 0277
33 မုံရွာဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၂၇)၊သာစည်လမ်း၊ဒေါနချောင်း ရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 071-26223, 071-24207, 071-24208 071-24207,8
34 မူဆယ်ဘဏ်ခွဲ(၂) အမှတ် -(အေအေ-၂၇/က)၊ ဘောဂလမ်း၊ (၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ မိုင်းယုရွာ၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း။ မူဆယ် ရှမ်းပြည်နယ် 082-55229, 55230, 55231, 55232 082-55229, 55230, 55231, 55232
35 မော်လမြိုင် အမှတ်(၂၃၆)၊အောက်လမ်းမကြီး၊ရွှေတောင် ရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်။ မော်လမြိုင် မွန်ပြည်နယ် 057-2014454 057-2027282
36 မြင်းခြံ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၂၄) ၊ (၁၂) လမ်း၊ စည်ပင်သာယာစျေးတောင်ဘက်၊(၈) ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ မြင်းခြံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 066 -2022883,4066-2022883
37 မြစ်ကြီးနားဘဏ်ခွဲ အခန်း (၄/၅) ၊ သခင်နတ်‌ဖေလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄)၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။ Kachin State 074 2526630,074 2526640 074 2526630,074 2526640
38 မြဝတီဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၁၀၆) ၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ရွှေမြင်းဝန်ဘုရားကြီးအရှေ့ဘက်မုဒ်ဘေး၊ဓါတုကလျာလမ်းထောင့်၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊မြဝတီမြို့၊ကရင်ပြည်နယ်။ ကရင်ပြည်နယ် 058 51463,05851462
39 မြိတ်ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၉၂), ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆိတ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ မြိတ် တနင်္သာရီ 059-41358,42911 059-41358,42911
40 မြောက်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၅၄၅ /က) ၊ ဝေပုလ္လလမ်း၊ ခေမာသီလမ်းမကြီး၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-9691349, 9691594 01-9691349, 9691594
41 မြောင်းမြဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၈၇)၊ ဉီးဘချိုလမ်းနှင့်၅လမ်းထောင့်၊၄ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး။ မြောင်းမြ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 042-71349, 71452 042-71349, 71452
42 ရေကျော်ဘဏ်ခွဲ အမှတ်-(၅၁)၊ ရေကျော်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊၊ ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-202822,301-202822, 3
43 ရေစကြို ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊စိတ္တသုခရပ်ကွက်၊ ရေစကြိုမြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ရေစကြို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 062-30475, 062-30476 ,062-30509 062-30475, 062-30476 ,062-30509
44 ရွှေဘို ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်း၊ ကျုံးတော်တွင်းရပ်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ရွှေဘို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 075-22961,22918 075-22961
45 လသာဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၄၄၄) ၊ ကမ်းနားလမ်း နှင့် (၁၇)လမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လသာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-211724,01-2303181 01-2303181
46 လားရှိုး ဘဏ်ခွဲ တိုက်- (၃)၊ အခန်း (၁/၂) ၊သိန္ဒီလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း။ လားရှိုး ရှမ်းပြည်နယ် 082-2931016, 2930734, 2930466 082-2930466
47 အောင်လံ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်- ၁၈၆/၈၇၈၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ မကွေး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 069-201529 069-201530, 1
Designed asafuturistic retail space,our store-like character now allows you to avail all our products and services.
You can experience open space banking which lets us engage better with you and buildatransparent and rewarding experience.
Open design allows our bank to assist you with any product and transactions, whenever you need it.
Open interactive spaces
Private zones with lorem-conferencing facility